Tayo xumada heysata Ciidamada Poliska Iyo sirdoonka Puntland | raascasayrmedia.com
← Garoowe:-Sir Fashilantay
Taliye Kuxigeenkii Ciidamada Booliska Degmada Madiina oo xalay gurigiisa lagu dhex dilay →
May 10, 2010 · 12:18 am
Tayo xumada heysata Ciidamada Poliska Iyo sirdoonka Puntland
Waxa arin adag ku ah Poliska & sirdoonka Puntland in aysan xakameyn karin magaalo yar amnigeeda sida Bosaaso , taasoo ay ugu wacan tahay in aysan laheyn qalab ay ku shaqeyaan oo ay ku heli karaan cadeyn dadka ka danbeeya magalada amni xumadeeda , Taasoo in badan oo raga amniga ay og yihiin dadka ka danbeeya hadana aysan ku cadeyn karin falalkaas , marka waa dowlad shaqeyneysa xili tariikhdu tahay 2010 qaabka ay u shaqeyneysana ah qaab hore oo 60 sano ka hor aan xata loo shaqeyn jirin .
Wax badan ayaa la yiri tayada Poliska kor haloo qaado si ay amniga u sugaan .Wax badan ayaa la yiri oo laga hadley arintaas hadana waa mid soo laala baneysa, sababtuna waxay tahay dowlada oo aan garaneyn qaab ay wax u habeyn laheyd . waxay dad badan ku cel celiyeen dhibtu waa wasiirka amniga , lakiin waxa cad in aysan tayo laheyn ciidamada poliska Puntland. daba gali karina nin doonaya in uu amni xumo kusoo dabaalo wadanka . waxay dad badan aamin san yihiin madaxweynihii hore ee Puntland inuu ka danbeeyo fowdada maanta ka jirta Bosaaso
Waxa kaloo dadku sugayaan Cismaan diyaano isaguna inuu soo galo khadka abuurista rabshooyinka magalada Bosaaso .
suįashu waxa tahay , maxay dowlada plan u ah oo aykaga hortagi karta raga nocaas oo kale
Poliska magalada bosaaso ama poliska Puntland oo dhan ma sameyn kara cadeymihii la hor dhigi laha maxkamada hadey ragan ku cadaato falalka nocaas oo kale,mise daba gali karaan.
walaahi waa arin ninkasta uu iska garanayo in ay jawaabtu tahay maya . maxay dowlada u tala ah marka oo ay kaga hortagi karta ragaas ay dad badani tuhunsan yihiin in ay dhibta wadaan . Maalin kasta waxaa la fura shir looga hadlayo Amniga Puntland ilaa goorme laga hadli doona amni mise maxay tahay dowlad sasabaad uun ku shaqeyneysa .
Waxan oran lahaa aniga waxaas oo dhan waxa looga bixi kara anagoo tayada poliska kor u qaadna, qofkii sharciga ku tuntana la geeyo maxkamad iyadoo loo aabayeelin , si uu u helo ciqaabta uu muteysto wuxuu doono ha ahaado ……..
W/Q Ali Warsame